Lawula iTV yoMlilo ngelizwi (nge-Echo, i-Alexa ngaphandle kolawulo olukude), i-Emulator.online, ▷
Ukuba sinesixhobo seAmazon Echo, njenge-Echo Dot elungileyo, ngoku kunokwenzeka Lawula i-Fire TV Stick usebenzisa ilizwi lakho, ngaphandle kwemfuneko yolawulo olukude. isono emva koko kufuneka ucofe iqhosha lokulawula ilizwi kwi Ulawulo olukude lweTV, ungahambisa amamenyu ngokuthetha, Enkosi kunxibelelwano phakathi kweTV yoMlilo kunye ne-Echo. Ngale nkqubo, awunokwazi ukukhangela iziqendu, imiboniso bhanyabhanya kunye nothotho lweTV, kodwa uqalise kwaye uyeke ukudlala, ubuye umva emva koko ujonge ulwazi oluceliwe ngumncedisi welizwi kwiTV, njengemozulu, ikhalenda okanye enye. Unokujonga imifanekiso efakwe yikhamera yokhuseleko eqhagamshelwe kwi-Alexa kwiTV kwaye ibonelela ngenye indlela xa ungayifumani indawo ekude yoMlilo weTV okanye ungafuni ukuphakama uyibambe kwaye ulawule yonke into ngelizwi lakho.
Ekuphela kwemfuneko yokusebenzisa iTV yoMlilo ngelizwi kukuba ixhunyiwe kwisixhobo seAmazon Echo. Oku kunokwenziwa ngoku ngokulula, kusetyenziswa iapp yeAlexa kwi-Android okanye i-iPhone. Ukuba iakhawunti efanayo yeAmazon isetiwe kwiTV yoMlilo kunye ne-Echo, ukuba iapp ye-Alexa inikwe amandla kuseto lweTV yoMlilo, sebenzisa iapp yeAlexa kwifowuni yakho yongeza i-Fire TV kwizixhobo ezilawulwa yi-Echo.
Kwi-Alexa app, yiya kwithebhu Okunye, emva koko thinta Ulungelelwaniso ekugqibeleni ungene Umabonwakude nevidiyoApha ungacinezela uphawu lwe-TV yoMlilo ukongeza isixhobo kulawulo lwe-Alexa. Ukudibanisa ngokuzenzekelayo kunokufezekiswa ngokuxelela i-Alexa kwi-Echo ukuba idlale imovie; Emva koko i-Alexa iya kubuza ukuba ufuna ukwenza ulawulo lwezwi lomlilo kwiTV.
Nje ukuba kwenziwe oku, ngaphandle kokusebenzisa ifowuni okanye irimothi, kunokwenzeka xelela isixhobo sethu se-Echo okanye i-Echo Dot: Into efana ne "Alexa, ndibonise imozuluUkubona uqikelelo lwemozulu kwisikrini seTV, ngaphandle kokuphendula ngelizwi lakho.
Eyona miyalelo iluncedo kakhulu ene-Alexa yokulawula iTV yoMlilo Zizo zilandelayo:
I-Alexa Apri iNetflix (inokusetyenziselwa nasiphi na isicelo esifakiweyo).
I-Alexa ifumana "isihloko" (I-Alexa iya kukhangela imovie okanye umboniso kuzo zonke iiapps ezifakiweyo, njengeNetflix okanye iNkulumbuso yeVidiyo.)
U-Alexa wabeka isihloko se-movie (ukuqala kwangoko ukudlala imovie oyikhangelayo).
U-Alexa ufumana ii-comedies (I-Alexa iya kukhangela iimovie kolo hlobo.)
I-Alexa ikhangele isihloko kwi-Youtube (ukukhangela ngokukodwa i-YouTube; uphendlo oluthile alusebenzi kuzo zonke izicelo).
I-Alexa ibuyela ekhaya O Yiya Ekhaya (ukubuyela kwiscreen esikhulu).
Khetha i-Alexa (ukukhetha ibhokisi ebonisiweyo kwi-Fire TV interface).
Alexa Yiya ngasekhohlo okanye ngasekunene (ukuhambisa ukhetho ngasekhohlo okanye ngasekunene).
I-Alexa Swayipha ngasekhohlo okanye ngasekunene (ukuhambisa ukhetho ekunene okanye ekhohlo izinto ezine ukuhamba ngokukhawuleza).
Alexa vai giu o vai su (ukuya phezulu nasezantsi kukhetho lweemenyu).
I-Alexa ibone iividiyo zam (ukuya kwicandelo leeVidiyo Zam zeVidiyo eNkulumbuso).
Kuba ubona ulwazi lwemozulu kwiTV ngokubuza i-Alexa ngelizwi lakho, ungabuza:
"Alexa, ndibonise ikhalenda"
"Alexa, ndibonise ikhamera"
"Alexa, ndibonise uluhlu lokwenza"
"Alexa, ndibonise ukugcwala kwabantu eRoma"
"Alexa, ndibonise uluhlu lokuthenga"
Ukufumana amanye amaqhinga okuvavanya nge-Fire TV kunye ne-Echo, sibone elinye inqaku malunga nendlela mamela umculo weTV (kunye neFireTV) kwiAmazon Echo
UMZALA: Lawula iTV ngelizwi lakho
Ukuba ufuna ngenene ukulawula iTV yakho ngelizwi lakho, ungakwenza oko ngokuthenga isixhobo esinokuguqula imiyalelo yelizwi ye-Alexa ibe yimithetho elawula kude. Ngamanye amagama, ungatshintsha amajelo kwiTV yakho usebenzisa ilizwi lakho enkosi kwiAmazon Echo. Ukwenza oku, kuya kufuneka uthenge isixhobo esinjengalesi Ikhaya leSmart ngee-euro ezingama-20, ekuvumela ukuba ulawule nayiphi na into enelizwi elikude.
OKUFUNDILEYO FUNDA: Ukudibanisa njani i-Alexa kuyo nayiphi na iTV